Ny sary hosodoko melankolika indrindra amin'ny tantaran'ny zavakanto | Famoronana an-tserasera
"Ofelia - Ophelia, John Everett Millais (1852) Tate Britain, London" avy amin'i Antonio Marín Segovia dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-ND 2.0
Melankoly dia heverina ho iray amin'ireo fihetseham-po izay tena voasambotra tamin'ny zavakanto tandrefana, satria maneho alahelo, tsy fahitana hafaliana ary tsy fahasambaran'olombelona.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hahita ny sasany amin'ireo sanganasa melankolika indrindra isika amin'ny fotoana rehetra.
1 Ny fahafatesan'i Ophelia (1851-1852)
3 Ilay mpandeha lalana ambonin'ilay ranomasina rahona (1818)
4 Mistery sy alahelo amin'ny làlana (1914)
5 Vary saha miaraka amin'ny goaika (1890)
Ny fahafatesan'i Ophelia (1851-1852)
Ity sary hosodoko nosoratan'i John Everett Millais ity dia mampiseho ny fiafaràn'i Ophelia, ilay andriambavilan'i Shakespeare, tantara malaza Hamlet, maty tototry ny rano, namarana ny fijaliany.
«Francisco de Goya y Lucientes (Fuendetodos, 1746 - Bordeaux, 1828) Sarin'i Gaspar Melchor de Jovellanos (1798)» avy amin'i Li Taipo dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-ND 2.0
Nandoko ny artista Espaniola lehibe Francisco de Goya, Gaspar Melchor de Jovellanos, angamba no lehilahy melankolika be indrindra aseho an-tsary. Ny sasany amin'ireo fiasa izay mamaritra azy dia ny fijery very ary ny loha miondrika am-pahoriana amin'ny tanana.
Ilay mpandeha lalana ambonin'ilay ranomasina rahona (1818)
Ny psikolojikan'ny mpanakanto dia hita taratra amin'ny endrika mandoko azy ireo. Ohatra iray mazava amin'izany ny asa Ilay mandeha ambonin'ny ranomasina rahona, nalain'i Caspar David Friedrich. Ato amin'ity sary hosodoko ity dia ahitantsika lehilahy melankolika mitafy mainty mandinika ny ranomasina misamboaravoara, amin'ny endrika mampalahelo ny volondavenona sy manga ny feo.
Mistery sy alahelo amin'ny làlana (1914)
Nosoratan'i Chirico, amin'ity asa ity dia hitantsika ny arabe tsy misy olona sy mangina, izay tovovavy manirery manana hoop ihany no hita. Hita taratra amin'ny fanirery lalina izany.
Vary saha miaraka amin'ny goaika (1890)
Genius melankolika iray hafa dia i Van Gogh nampijaly. Afaka mianatra bebe kokoa momba ny fiainany mahaliana ianao amin'ity lahatsoratra teo aloha. Ity hoso-doko mahaliana mampiseho goaika manidina ambonin'ny tanimbary misy lanitra rahona ity dia nopetahina sary tamin'ny andro farany niainan'i Van Gogh. Asa miaraka amina fatra melankoly, hita taratra amin'ny tontolo.
Ary ianao, fantatrao ve ireo asa hafa izay taratry ny alahelo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny sary hosodoko melankolika indrindra amin'ny tantaran'ny zavakanto